फ्रेवुअरी 25, 2019 अप्रील 12, 2019 साइन्स इन्फोटेक	9 Comments आयुर्वेद, डा. राम बहादुर बोहरा, नीम
आयुर्वेदमा निमलाई पहिलो श्रेणीको औषधि मानेको छ । स्वादमा तितो गुण भएको निमको उपयोग थुप्रै रोगहरूमा गर्न सकिन्छ । निमको पात, बोक्रा, फल र तेल सवै प्रयोगमा आएको पाइन्छ । निम एउटा भएपनि यसको गुण धेरै हुनाले आज निम प्राय: लोपोन्मुख हुने अवस्थामा पुग्न थालेको छ । नेपालमा निमको दतिवन गर्ने पर्चलन धेरै पहिलेदेखि थियो । निमको दतिवन नियमित गर्ने व्यक्तिले यदि सर्पले कसैलाई टोक्छ भने पनि जहरले समेत चाँडो असर गर्दैन भनेको छ ।
निमको बोक्राको प्रयोग गर्नाले छाला सम्बन्धि रोगमा र मलेरियामा राम्रो फाइदा गर्दछ । निमको पातमा बैक्टीरियासंग लड्ने गुण हुनाले डण्डीफोर, लुतो लगायत सवै खालको छाला सम्बन्धि रोगमा राम्रो फाइदा हुने देखिन्छ । निमको महत्व बारेमा धेरैलाई थाहा नभएकोले यसको प्रयोग हामीले कमै मात्रामा गर्ने गर्छौ । निमको पत्ता तितो हुन्छ यसलाई हामीले औषधिको रुपमा प्रयोग गर्न सक्छौं । निमको प्रयोग कहाँ र कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी मानिसलाई कम हुने भएकोले यसको प्रयोग कम भएको हो । यसको उपयोग थाहा पाउदा स्वास्थ्यलाई निकै फाइदा हुन सक्छ ।
निमको उपयोग धेरै पहिलेदेखी नै दांतको सफाई गर्न गरिदै आएको छ । दिनहु निमको काठ, निमको सानो हाँगाले दात सफा गर्ने बानीले दाँतमा कुनै किसिमको रोग लाग्न दिदैन । लुतो आयको बेला निमको तेल, बेसार र फिट्करी सबैलाई मिस्रण गरी लगाउनाले जस्तो सुकै छालाको रोग निको हुन्छ । निमको पात, फल र बोक्राबाट होम्योपैथीक कम्पनीले (Azadirachta Indica Q) मदर टिङ्चर बनाएर ल्याएको छ । यसको प्रयोग छाला सम्बन्धि रोग, ज्वोरो, मलेरिया ज्वरो, कुष्ट रोग आदिमा यो औषधिले राम्रो फाइदा गर्दछ ।
मात्रा : ५,१० थोपा औषधि थोरै पानीमा मिलाएर ठिक नहुदासम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर कतिपय अवस्थामा भने ६,७ दिन भन्दा बढी नदिने भनेको छ ।
नोट : स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि समस्या समाधानका लागि निम उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने एक पटक आयुर्वेदिक र होम्योपैथीक चिकित्सकसँग परामर्श अवश्य लिनुहोला ।
← युवा बैज्ञानिकहरुका लागि Innovation For Prosperity कार्यक्रम ल्याईनेछ – उपकुलपति डा. श्रेष्ठ
सत्ता हुनेहरुमा व्यक्तिगत स्वार्थको पराकाष्ठा →
अप्रील 2, 2019 अप्रील 2, 2019 साइन्स इन्फोटेक 12
9 thoughts on “नीम (Azadirachta Indica) र यसको प्रयोग”
Pingback:धतुरो र यसको प्रयोग
Pingback:कालो तिल र यसको प्रयोग
Pingback:गाउँघरमा पाइने तितेपातीको औषधीको रुपमा प्रयोग
Pingback:बहुुगुणी औषधी अमलाका अपत्यारिला औषधीय गुणहरु